01/17/13 ~ Myanmar Forward
ဘုရား သခင် မျက်ရည်ကျပြီ- သို့တည်းမဟုတ်- ဘုရားသခင် အမြတ်ထွက်ပြီ တစ်ဖုံ ကေအိုင်အေမှ တပ်မတော်ကို ပစ်တဲ့ လက်နက်ကြီး. တပ်မတော် စခန်းပေါ် မကျပဲ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုသွားထိလို့ဗျို့
Posted by drmyochit Thursday, January 17, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ,ကေအိုင်အေ | No comments
ဇန်န၀ါရီလ (၁၆)ရက်နေ့ မွန်းလွဲ(၃) နာရီ အချိန်တွင် KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်း သူများ က မြန်မာ့ မျိုးချစ် တပ်မတော် စခန်းအား လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ ရာမော်ဝမ်း ကျေးရွာရှိ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယန် အသင်းတော်၏ ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းဆောင်အား လက်နက်ကြီး ကျရောက် ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ကေအိုင်အေတို့ အတင်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသော ၁၅ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များနှင့် အသက် ၅၀ကျော် သက်ကြီး ရွယ်အိုတို့ စာရင်းအတိအကျဖြင့် ဖွင့်ချပြီ
Posted by drmyochit Thursday, January 17, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ,ကေအိုင်အေ | 1 comment
မြစ်ကြီးနား မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာများမှ အရွယ် မရောက် သေးသူများ ကို စစ်မှုထမ်း ဆောင်ရန် KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်း သူများ မှ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် သွားပါသည်။
ဥပဒေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖေါက်နေသော Eleven Media Group အားအရေးယူပေးပါရန်။
Posted by drmyochit Thursday, January 17, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
စာရေးသူ သီရိမင်းကျော် ဆိုသူမှာ ဘာသာ စကား(၃)မျိုး တတ်ကျွမ်းပြီး Higher Grade Pleader တွင် အလုပ် လုပ်ပါသည်ဟု သူမ၏ စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသူ ဖြစ်ပါသည်။ Eleven အင်တာနက် စာမျ က်နှာ မှ Share လုပ်သူများပါ အရေးယူမည့် စာသားများကြောင့် ကျွန်မကို တရားစွဲပါဟု ကြွေးကြော် ခဲ့ သူဖြစ် သည်။ ကေအိုင်အေနှင့် အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးမှုလုပ်ခြင်းသည် တရားဝင် နည်းလမ်းဆိုပါက သူမ၏ အွန် လိုင်း မှ အရေးယူပေးပါရန် တိုင်ကြားချက်အားလည်း အစိုးရအဖွဲ့မှ တစ်ခုခု လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟု မျှော် လင့်ရင်း ထပ်ဆင့်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မြန်မာတွေ ဘယ်တော့မှ မကြောက်တတ်
Hot News ကို ဖတ်လာတာကြာပြီ။ ဖတ်ပဲဖတ်ခဲ့တယ်။ ကြိုက်လို့ကို ဖတ်တာ။ ခုတော့ ၀င်ရေးစရာလေးဖြစ် လာတယ်။ ဆရာနန်းဦက “မြန်မာတွေ ကြောက်တတ် သလားဟေ့” လို့ မေးနေပြီ။ စစ်တမ်းတစ် ခုအနေနဲ့ကောက်ရင် မြန်မာတွေမကြောက် တတ်လို့ဖြေလိုက်ပါမယ်။
စစ်ပွဲအခြေအနေ ပြင်းထန် လာပါက ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန် ပြည်နယ် က လက်ခံနိုင်ရန် စီစဉ်
Posted by drmyochit Thursday, January 17, 2013, under သတင်းများ | No comments
တပ်မတော်နှင့် KIA တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲ အခြေအနေ ပြင်းထန်လာပါက ကချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခ သည် များကို တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ဒေဟောင်ဒေးနှင့် ကျင်ပို ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှ ဒေသ ခံ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များက ကချင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ပြေးလာသော စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကို လက်ခံနိုင်ရန် စခန်းလေးခု တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း The Global Times တွင်ဖော်ပြထားချက်အရ သိရသည်။
ရိုဟင်ဂျာ ၄၉ ဦး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ မြန်မာသို့ ပြန်ပို့
Posted by drmyochit Thursday, January 17, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် ရိုဟင်ဂျာ ၄၉ ဦးကို ကော့ဘဇားခရိုင်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က ပြန်ပို့လိုက်သည်ဟု သိရသည်။ တနေရာစီမှ ဖမ်းမိခဲ့သည့် ၎င်းတို့အနက် ၂၆ ဦးကို မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ကလည်းကောင်း၊ အခြား ၂၃ ဦးကို ညနေ ၅ နာရီကလည်းကောင်း အစားအစာများဖြင့် ပြန်ပို့ လိုက် သည်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အခြေစိုက် The Daily Star သတင်းတရပ်တွင် ရေးသားထားသည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ထက် ပိုပြီးလွတ်လပ်လာကြောင်း မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်ဒီစီ အခြေစိုက် Freedom House အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ၂၀၁၃ခုနှစ် ကမ္ဘာတစ်ဝှန်း လွတ် လပ် မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာက ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကချင်ဒေသတွင်းစစ်ပွဲတွေ ရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒပြနေကြသော ထိုင်းနိုင်ရောက် ကချင်-မြန်မာတိုင်း ရင်းသား များ။
မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်နဲ့ KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်တို့ အပြန် အလှန်တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ မြန်မာဘက်က လက်နက်ကြီးကြောင့် ကချင် အရပ်သား ၃ ဦး သေဆုံး သွားတဲ့နောက် ကချင်ပြည်နယ်က ပဋိပက္ခတွေအပေါ်မှာ နိုင်ငံတကာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ တိုးလာပါတယ်။ ကချင် အရေး ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ တချိန်က မြန်မာကို ကိုလိုနီပြုခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ အနေနဲ့ ပိုပြီး ကူညီ ဆောင် ရွက်ပေး သင့်တယ်လို့ ကချင်အရေး လှုပ်ရှား သူတွေက ပြောကြပါတယ်။
Posted by drmyochit Thursday, January 17, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတိုက်အခံ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို အရေးယူ အပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ အရင်စစ်အစိုးရ လက် ထက် ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတရပ်ကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း အစိုးရက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မအူပင်ခရိုင် ညောင်တုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအသီးသီးမှ တောင်သူ လယ် သမားများ၊ ရေလုပ်သားများ သည် အင်အား(၄၀၀)ခန့်သည် (၁၇-၁-၂၀၁၃)နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲမှ စတင် ကာ ညောင်တုန်းမြို့နယ်တွင် ကိုယ်ကျိုး နစ်နာ ဆုံးရူံးမှု များ အတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်၍ ဆန္ဒဖော် ထုတ်နေကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
Posted by drmyochit Thursday, January 17, 2013, under နည်းပညာ,သတင်းများ | No comments
Google က မောင်းသူမလိုတဲ့ ကား စမ်းသပ်ပြသလိုမျိုးပဲ ပြိုင်ဆိုင်မှု အနေနဲ့ ဘီးမလို မြေမထိ ကား ( Hover Car ) ကို ယခုလို ဗီဒီယိုနဲ့ မိတ်ဆက်ပြသ ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှ မိုင်ရှစ်ရာကျော်ဝေးသည့်လိုင်ဇာသို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်မည်
ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၆။
ရန်ကုန်မြို့မှ မိုင် ၈၀၀ ကျော်ဝေးကွာသည့် ကချင်ပြည်နယ်၊ လိုင်ဇာ သို့ ငြိမ်းချမ်းရေး အလံတော်ကို လမ်းလျှောက် သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်အဖွဲ့မှ ကိုရန်နိုင်ဦးက ပြောကြား သည်။
ကေအိုင်အေ အဖွဲ့က ရွာသူ ရွာသား ၄၅ ဦးအား ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်၊ ယာဉ်များအား ဆက်ကြေး ကောက်ခံခဲ့
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီလ ၁၆
ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁နာရီ ခန့်တွင် ကေအိုင်အေ အဖွဲ့မှ အင်အား ၂၅ ဦးခန့်သည် မြစ်ကြီးနား မြို့နယ် အာလမ် ကျေးရွာအုပ်စု အူဗျစ် ကျေးရွာရှိ ရွာသူ ရွာသား ၄၅ ဦးအား ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးသွား ခဲ့ကြောင်း၊ ဖမ်းဆီး ခံရသူများ ထဲတွင် ကျောင်းသား ၉ ဦး၊ တောင်သူ ၁၅ ဦး၊ အခြား ၃၀ ဦးပါရှိ ကြောင်း၊ ဖမ်းဆီး ခေါ် ဆောင်ခံရသူ များတွင် အသက် ၁၃နှစ်မှ အသက် ၄၀ အတွင်းရှိ လူငယ် လူရွယ် အမျိုးသား များပါရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ကလို့ထူးဘော DKBA နဲ့ BGF တို့ကြား တင်းမာမှု
ကလို့ထူးဘော DKBA အဖွဲ့နဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF အဖွဲ့ ဒီလဆန်းပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တင်းမာမှု ပြဿနာ မှာ အသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ လက်နက်အလက် ၄၀ ကို ဒီကေဘီအေ အဖွဲ့က ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း မရှိသေးဘူးလို့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း ၁၀၁၅ ရဲ့တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူး ၀င်းနိုင်စိန်ကပြောပါတယ်။
တပ်မတော်သားတွေကို နိုင်ငံတော်ကသာ ထောက်ပံ့ဖို့ လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေး"
တပ်မတော်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေအားလုံးက ရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်ထဲ ထည့်စေပြီး တပ်မတော်သားတွေရဲ့ ခံစားခွင့်တွေကိုတော့ နိုင်ငံတော်ကပဲ အပြည့် အဝ ဘတ်ဂျက် ချပေးစေ လိုတယ် လို့ ဒီကနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး မှာ ပဉ္စမ ကာလတိုငါးနှစ် အမျိုး သား စီမံကိန်းမူကြမ်း (၂ဝ၁၁/၂ဝ၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂ဝ၁၅/၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထိ) ဆွေးနွေးရာမှာ မွန်ပြည် နယ် မဲဆန္ဒနယ်က ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး က ပြောသွားပါတယ်။
Posted by drmyochit Thursday, January 17, 2013, under ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး | No comments
တရုတ်နံနံကို ရှေးကတည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြထားခဲ့တာကြောင့် သက် တမ်း ရင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် တစ်မျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တရုတ်နံနံရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို တိတိ ကျ ကျ သိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကေအိုင်အေအဖွဲ့ကို နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့အဖြစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းရန် အစိုးရ၏ အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက် သည့် သတင်းများကို ဖတ်ရင်း ကေအိုင်အိုအဖွဲ့က အစိုးရကို ပင်လုံစာချုပ်ပါ အချက်များကို အကောင် အထည် ဖော်ရေး တင်ပြထားကြောင်း၊ ပင်လုံစာချုပ် အတိုင်းသာ အကောင် အထည်ဖော်လျှင် အလို အလျောက် လက်နက် ဖျက်သိမ်း သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို တင်ပြမှုတွေကိုသတိပြုမိသည်။ ထို့နောက် ကချင် ပြည်နယ်နေ့၊ မနောပွဲ၊ ကေအိုင်အိုအဖွဲ့က လက်နက်နှင့် ပွဲတက်ရောက်ခွင့် စသည့် သတင်း များကို ဆက်ပြီး ကြားရသည်။
KIA အဖွဲ့အတွင်းမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ ဖိနှိပ်ခံနေရ
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းဖြစ် ပွားနေ တဲ့ တိုက် ပွဲတွေမှာ KIA ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ အနေနဲ့ လူမျိုးရေး ခွဲခြား ဆက်ဆံ မှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး တိုက်ပွဲရဲ့ရှေ့တန်းနေ ရာတွေမှာ ကချင်လူမျိုးတွေကို မထားဘဲ ရှမ်းနဲ့ ရခိုင် လူမျိုးတွေကိုသာ အသေခံ တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေပါတယ်။ ကချင်မျိုးနွယ်စုချင်းအတူတူထဲမှာပင် ဂျိမ်းဖောတွေ ကို ဦးစားပေးတဲ့အတွက် KIA အဖွဲ့မှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကြောင့် မကျေနပ် မှုတွေဖြစ်နေ ပါတယ်။ KIA အဖွဲ့ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေလဲ အခြားလူမျိုးတွေ နည်းတူ ဖိနှိပ်ခံနေရပါတယ်။ သူတို့ အနေနဲ့ KIA ထဲကို စိတ်ပါဝင်စားလို့ ရောက်လာသူတွေမဟုတ်ဘဲ အတင်းအကြပ် ဖမ်းဆီးခံရပြီး ရောက် လာ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်မလေးများ (ဓါတ်ပုံ) (၃)
Posted by drmyochit Thursday, January 17, 2013, under ဓါတ်ပုံသတင်း,ကေအိုင်အေမလေးများ,ကေအိုင်အေ |2comments
သေနတ်တွေပဲ ကိုင်ကိုင်၊ ဘာတွေပဲ လုပ်လုပ်၊ မိန်းကလေးကတော့ မိန်းကလေးသာ ဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးများကို အကာအကွယ်ပြု တပ်မတော်ကို ခုခံရန် ပြင်သော ကေအိုင်အေကတော့ မည်သို့ အဆုံးသတ်မည် မသိရသေး။ ဤသို့သော မိန်းကလေးများသာ ကေအိုင်အေ အင်အားစာရင်းတွင် ပါဝင်ပါက
ကေအိုင်အေ ထဲက ကေအိုင်အေ တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Eleven Media ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် ပါးစပ်ထဲ ဂမ်ရှောင်ငယ်ပါဝင်နေသဖြင့် ပြည်သူအများကို အမှန် အတိုင်း မပြောရဲသည့် ကေအိုင်အေဖောက်ခွဲခဲ့သော မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး မီးရထားလမ်းရှိ တံတား အကြောင်း (ဓါတ်ပုံ/ဗီဒီယို)
မြစ်ကြီးနား- မန္တလေး မီးရထား လမ်းပိုင်း နဘား ဘူတာနှင့် အင်းတော် ဘူတာကြား မိုင်တိုင် အမှတ် (၅၈၉)ရှိ ပေ ၁၆ဝ ရှည် တံတား အမှတ် (၄၃၆)နှင့် ၎င်းနှင့် ယှဉ်လျက် ရှိသည့် နဘား- ကသာလမ်း ပိုင်းမှ ပေ ၁၆ဝ ရှည် တံတား အမှတ် (1 BK) တို့၌ ယမန်နေ့ ည ၈ နာရီ ၇ မိနစ် ခန့်တွင် မိုင်းပေါက်ကွဲ ဖြစ်စဉ် နှစ်ခု တစ် ပြိုင်တည်း ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တပ်မတော်နှင့် အစိုးရအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကို အပြီးတိုင် ရပ်တန့်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရန် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ သဘောထား ထုတ်ပြန်
တပ်မတော်နှင့် အစိုးရအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကို အပြီးတိုင် ရပ်တန့်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် သဘောထား ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ကချင်ဒုက္ခသည်များထံ ထောက်ပံ့သည့် ပစ္စည်းများ KIA လက်ဝါးကြီးအုပ်
မစ်ကြီးနား၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၆။
KIA နဲ့ အစိုးရတပ်တွေရဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဒုက္ခသည်ဦးရေ တစ်နေ့ ထက် တစ်နေ့ ပိုမို တိုးပွားလျက်ရှိပါတယ်။ အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ ကချင် ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် နေထိုင် စားသောက်ရေးကို အစိုးရ နဲ့စေတနာရှင်တွေက တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်နေလို့ စိုးရိမ်ပူပန် စရာ မလိုပေ မယ့် KIA ထိန်းချုပ်မှု အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်း(၇)ခုက လူတွေကတော့ KIA ရဲ့ အနိုင် ကျင့် တာကို ခံနေကြရပါတယ်။
မန်စီမြို့နှင့် ရွာများတွင် အိမ်တစ်အိမ် လူတစ်ယောက် KIA သို့ ၀င်ရန် အမိန့်ထုတ်
မန်စီ ဇန်န၀ါရီ ၁၆ ရက်
ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၃) ရင်း(၁) တပ်ရင်းမှူး မှ မန်စီမြို့ ရပ်ကွက်ပတ်ဝန်းကျင်ရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးများကို ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ နေ့လည်မှာ ခေါ်ယူပြီး အိမ်စုတစ်ခုကို လူတစ်ယောက် ကေအိုင်အေ ထဲသို့ မဖြစ် မနေ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
၀ိုင်းမော်မှ ဆဒုံးကား လမ်းတွင် KIA မှ အခွန်ကောက် တာလား…. ? ဓါးပြတိုက်တာလား … ?
၀ိုင်းမော်မှ ဆဒုံးသို့ သွားသော လမ်းပေါ်တွင် သွားလာနေသော ဆိုင်ကယ်နှင့် ကားများကို KIA မှ ဓါးပြ တိုက် သည့်ပုံစံနှင့် အခွန်ကောက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယမန်နေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲခန့်၌ ဝေါ်ဆက်ယန်နှင့် သွမ်တောင်ကြားတွင် KIA အဖွဲ့မှ ဖြတ်သန်းသွားလာ နေသော ခရီးသည်တင် ယာဉ်များနှင့် ဆိုင်ကယ်များအား ရပ်တန့်စေပြီး အခွန်ကောက်ခံခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပစ္စည်းများကို အဓမ္မ ဖျက်ဆီလုယက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။
Posted by drmyochit Thursday, January 17, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
( အမိန့် အမှတ်၊ ၂ / ၂၀၁၃ )
၁၃၇၄ ခုနှစ်ခုနှစ်၊ပြာသိုလဆန်း ၅ ရက် ( ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက် )
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ ) နှင့်ပြည်ထောင် စုအစိုးရ အဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ ၆၈၊ပုဒ်မခွဲ ( က ) တို့ ပါ ပြဌါန်းချက်များအရ အောက်ဖော်ပြပါ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအား ၄င်းတို့ ၏ သဘောဆန္ဒအလျောက် ရာထူးမှနှတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်သည်-
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အထောက်အထား မရှိသေးတဲ့ မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေ နဲ့ အ သက် ၁၅နှစ်အောက် ကလေးတွေကို နိုင်ငံသား စီစစ်မှုပြုလုပ်ပြီး ယာယီပတ်စပို့စ် ကိုင်ဆောင် ခွင့်ပြု လုပ်ပေးနေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိုင်းအစိုးရက ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၅ရက်နေ့အထိ တိုးချဲ့ လုပ်ဆောင် ခွင့်ပြု လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုးဝင်လာသော ရိုဟင်ဂျာ ၈၅၇ဦး၏ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို စစ်ဆေးရေး မြန်မာ့အကူအညီယူမည်ဟု ထိုင်းပြော ကြား
Posted by drmyochit Thursday, January 17, 2013, under သတင်းများ |2comments
ဘန်ကောက် ၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၆။
ထိုင်း အစိုးရသည် ၎င်းတို့ နိုင်ငံအတွင်း တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသော ရိုဟင်ဂျာ ၈၅၇ ဦး၏ နိုင်ငံ သားဖြစ် မှုကို စစ်ဆေးသွားရန် မြန်မာ၏ အကူအညီကို ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းအာဏာပိုင် များက ပြောကြား လိုက်သည်။
မြောက်ဦးတွင် သေနတ်လုစဉ် ဓါးခုတ်ခံရသည့် စစ်သား သေဆုံးသွားပြီဟု သတင်းထွက်ပေါ်၍ တပ်မတော်မှ လက်တုံ့ပြန်မည်ကို စိုးရိမ်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့နယ်တွင် သေနတ်လုစဉ် အတွင်း ဓါးခုတ်ခံရသည့် ဒုတပ်ကြပ် စိုးဝင်း စစ်တွေဆေး ရုံတွင် သေဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ထွက်ပေါ်နေသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်းက မိုင်ဂျာယန် ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ လုံခြုံရေးအတွက် ဗုံးခိုကျင်း တူးဖော် နေစဉ် တွင်းပြိုကျတာကြောင့် ကလေးငယ် ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက အစိုးရ စစ်တပ်က ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့ အတွင်းကို လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ် တာကြောင့် အရပ်သား
ဘုရား သခင် မျက်ရည်ကျပြီ- သို့တည်းမဟုတ်- ဘုရားသခင် ...
ကေအိုင်အေတို့ အတင်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသော ၁၅ နှစ်ေ...
ဥပဒေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖေါက်နေသော Eleven ...
ရိုဟင်ဂျာ ၄၉ ဦး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ မြန်မာသို့ ပြန်ပို့...
ညောင်တုန်းမြို့နယ်ရှိ တောင်သူများ၊ ရေလုပ်သားများ က...
ရန်ကုန်မှ မိုင်ရှစ်ရာကျော်ဝေးသည့်လိုင်ဇာသို့ ငြိမ်...
ကေအိုင်အေ အဖွဲ့က ရွာသူ ရွာသား ၄၅ ဦးအား ဖမ်းဆီး ခေါ်...
တပ်မတော်သားတွေကို နိုင်ငံတော်ကသာ ထောက်ပံ့ဖို့ လွှတ...
KIA အဖွဲ့အတွင်းမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်မျ...
ကေအိုင်အေ ထဲက ကေအိုင်အေ တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Eleven Me...
တပ်မတော်နှင့် အစိုးရအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြ...
ကချင်ဒုက္ခသည်များထံ ထောက်ပံ့သည့် ပစ္စည်းများ KIA လက်...
မန်စီမြို့နှင့် ရွာများတွင် အိမ်တစ်အိမ် လူတစ်ယောက်...
၀ိုင်းမော်မှ ဆဒုံးကား လမ်းတွင် KIA မှ အခွန်ကောက် တ...
ခိုးဝင်လာသော ရိုဟင်ဂျာ ၈၅၇ဦး၏ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ...
မြောက်ဦးတွင် သေနတ်လုစဉ် ဓါးခုတ်ခံရသည့် စစ်သား သေဆံ...